Qualcomm Inoburitsa Snapdragon 888 Mabhenji: Kuvimbisa Kuita
Nhasi Qualcomm iri kuburitsa seti yemabhenji mhedzisiro kune yavo nyowani Snapdragon 888 SoC iyo yakagadzirirwa simba regore rinouya mureza weApple zvishandiso. Kazhinji, semakore apfuura, tingadai takave nemikana yekumisikidza reQualcomm's rezvigadziriso isu pachedu panguva yechipset yekutanga chiitiko, kana masvondo mashoma gare gare panguva yeCES. Zvisinei nekuda kwemamiriro ezvinhu akajeka, izvi zvaisakwanisika gore rino.
Seimwe nzira, Qualcomm iri panzvimbo yekugovana nepepanhau seti yemabhenji mhedzisiro kubva kune yavo nyowani Snapdragon 888 yekugadzira dhizaini foni. Kazhinji, poindi yekuve nemuchina wekudhinda iwo madhizaini pachawo ndeyekuti inowedzera kuzvionera kwakazvimirira kwematanho ebenchmark. Ino nguva yakatenderedza isu tichafanirwa kuita kusvetuka kudiki kwekutenda mukururama kwenhamba dzeQualcomm - hongu isu tichiri kunyatso tarisira kuti manhamba ave akarurama uye kuburitswazve mumidziyo yekutengesa.
Nehurombo, nekuti ruzhinji rweyedu inonakidza mobile test suite yakatenderedza SoCs ine yakasarudzika mabhenji emukati, izvo zvinoreva kuti izvo zvichave zvisipo kubva nhasi kwanhasi kupfupika kufukidza.
Pakati pezviratidzo izvo Qualcomm yakamhanya pane AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal uye Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf uye UL Procyon. Isu tinonyatso mhanyisa subset yeaya mabhenji mabhenefiti chikamu chedu chenguva dzose kufukidzwa, saka ini ndinenge ndichingo tarisa pane izvo chaizvo zvekutanga neGeekBench, GFXBench uye Procyon.
Kutanga kubva isu tine GeekBench 5, iyo mumaonero angu kazhinji yakanaka yakanaka yekuita bhenji reCPUs, uye kazhinji zviyero zvinoenderana neSpEC. Pano tinoona iyo itsva Snapdragon 888 yekutanga-nguva yekushandisa kweCortex-X1 cores muchiito.
Iyo imwechete-yakashongedzwa mashandiro zvibodzwa yakakwira kubva pa919 poindi pane iyo Snapdragon 865 kuenda ku1135 pane iyo nyowani SoC, 23.5% yekuita kukwidziridzwa maringe neyakaitangira yakatangira. Izvi zvinoenderana neQualcomm inosimudzira mashandiro ekuita e25%, uye kazhinji ndizvo zvataitarisira kupihwa kuitwa kweQualcomm kweCortex-X1 mune chipset nyowani. Sechiyeuchidzo, iwo matsva eX1 akavharirwa pa2.84GHz - mafungidziro akafanana neaya maA77 cores paS865, asi akaderera kupfuura iwo 3.09GHz A77 macores eSpapdragon 865+. Nekuda kweizvozvo, kupesana ne865+ iyo 888 yekuita mukana ndeye 15.4% chete, iyo isinganzwike kunge inonakidza.
Multi-threaded performance yeiyo chip nyowani inouya mu16.9% zvirinani kupfuura ayo akaitangira. Izvi zvaitove odder kuona sezvo ini ndaitarisira kuvandudzwa kwakakura. Kufunga zvakawanda nezvazvo, ndinofungidzira kuti zvine musoro - iyo nyowani Cortex-A78 musimboti, iyo iri kushandiswa seye 3x yepakati cores yeSoC nyowani, inongoshambadzirwa sekupa 7% IPC mukana pamusoro peyaakatangira.
Zvichakadaro, Qualcomm yakawedzera saizi yavo yeL2 cache pane epakati cores kubva pa256KB kuenda ku512KB, asi neimwe nzira vakasiya mafambiro avo ewachi asina kuchinja pa2.42. Pamwe chete neisina kuchinjika 4x Cortex-A55 cores pa1.8GHz ndinofungidzira mashandiro ese echikwata chakazara haana kunyatso shandura zvese izvo, neiyo X1 prime core iri gamba rechiratidziro chechizvarwa ichi.
Kuenderera mberi nekuita kweGPU, iyo nyowani Snapdragon 888 inoratidzira iyo nyowani Adreno 660 GPU, uko Qualcomm inovimbisa kukwidziridzwa kwekuita 35%. Qualcomm yakaburitsa GFXBench Aztec Normal uye Manhattan 3.0 zvibodzwa. Takaenderera kubva kuManhattan 3.0 kuenda kuManhattan 3.1 kare kare, saka hatina zviyero zvekuenzanisa neQualcomm's 169fps nhamba, asi isu tinomhanya Aztec Zvakajairika.
Mune ino bhenji, Qualcomm yakanyorwa mamakisi e86fps inopfuura 55% nekukurumidza kupfuura yapfuura chizvarwa Snapdragon 865 zvishandiso. Ichi chingave chiri chikamu chekunze, kana chingave chiratidzo chebhenefiti yeiyo yekuwedzera bandwidth band inopihwa neiyo SoC inokurumidza LPDDR5-6400 rutsigiro - Qualcomm yakataura kuti chizvarwa ichi GPU ichakwanisa kusimbisa icho chikamu chechip zvakanyanya .
Nepo iyo Snapdragon 888 isingaite senge ichaenderana nepamusoro pekuita zvibodzwa zveA13 kana A14 SoCs anoshandiswa muApple's iPhones, kushanda kwakasimba kunoenderana zvakanyanya pasimba rekushandisa chip. Kana izvi zvikagara pakati pe4 ne4.5W, saka ruzhinji rwemafoni epamberi eApple muna 2021 angangokwanisa kuchengetedza nhamba yepamusoro yekuita uye kubvumira Qualcomm kuti idzokerezve korona yekufambisa nhare kubva kuApple. Zvikasadaro kana iyo chip ichifanira kunyatso throttle, ipapo 888 ingangotadza kusvika pakutora korona. Asi kunyangwe kana zvirizvo, kune vashandisi veApple hazvifanirwe kunge zvine basa zvakanyanya: kuburitsa kusununguka kwemafoni e2020 kwaizove kuri kukuru, uye nekure kweimwe huru yeGPU kuita kusvetuka Qualcomm yakwanisa kubudirira kusvika parizvino.
Panyaya yeAI Benchmarks, Qualcomm haina kunyatsoburitsa chero chinhu nenzira imwecheteyo yatinoita, saka uyu mukana wakanaka wekuwedzera UL's nyowani Procyon AI Inference bhenji kune yedu suite.
Benchmark inokwanisa kumhanya pamatanho ekuwedzera ekuwedzera mukati meSoC, uye zvakare iri kukwanisa kutora mukana weyakajairwa TensorFlow Vamiriri, senge Samsung's EDEN fomati.
Pano iyo nyowani Snapdragon 888 iri kutumira kuita kwakanakisa, ichiendesa angangoita 3x mamakisi eSpapdragon 865+ uye zvakanyanyisa kupfuura chiyero cheyero yekuwedzera kweiyo Hexagon 780 nyowani. Iyo Hexagon nyowani IP nyowani nyowani uye ingangoita kuvandudzwa kukuru kumwe chete. yeiyo yose Snapdragon 888 sezvo ichivimbisa kufambira mberi kukuru mukuita uye kugona kwemagetsi - kwete chete kupesana nechizvarwa chakapfuura Snapdragons asiwo nekurwisa makwikwi dhizaini izvo zvisati zvave neyakajairika DSP / ML Hardware block muSoCs yavo.
Qualcomm zvinoshamisa zvakare yakaburitsa MLPerf mhedzisiro pane iyo nyowani chip. Iyo Android vhezheni yeMLCommons 'benchmark suite iri nyowani muchoto, uye pakati pezvimwe zvinhu, inotipa bvunzo nyowani yakamisikidzwa yakanyatsoenderana kune iyo indasitiri.
Iyo nyowani Snapdragon 888 iri kuratidza kuwanda kukuru kwekuita kana ichienzaniswa neyakatangira, nezvakawanikwa zvinosvika 4x mune mimwe bvunzo. Zvekare, izvi zvinopfuura kungoita dzidziso yekuumbiridza nzira dzekuvandudza kwemauniti eIP mabheji, uye zvingangoita zvakasungirirwa kune nyowani yekurangarira yekuvaka yeiyo itsva Hexagon block seyakazara.
Pakazara Zvakanakira Kutanga Maonero - Kumirira Kwekutanga Midziyo
Kuteedzera kuziviswa kwayo masvondo mashoma apfuura, yanhasi mabenchmark mamaki ekuburitswa anobatsira kuwedzera kusimbisa kwedu kwekutanga kuratidzwa kwe (uye tarisiro ye) Qualcomm nyowani Snapdragon 888 SoC.
Padivi reCUU tiri kuona kuvandudzwa kwakanaka, kunyangwe nezvakachengetedzwa zveQualcomm. Zvichakadaro iyo Adreno GPU nyowani inoita kunge ichiita pamwe neQualcomm yakavimbisa - kana zvisiri nani. Saka sezvo zvinhu zvakamira, chidimbu chisipo chechidhiraizi kushandiswa kwesimba; kana zvikapedzisira zvave kukwikwidzana ipapo, saka Qualcomm ine pfuti yekuwanazve korona yekuita mune nhare.
Chekupedzisira, iyo Hexagon DSP nyowani yakazonyatsooneka sechinhu chinonyanya kunakidza chehardware nyowani muSpapdragon 888. Aya manhamba ekuita anosimbisa kuti Qualcomm yauya sei muchizvarwa chimwe chete, sezvakaratidzwa neiyo nyowani yeSoC inoshamisa mashandiro ekusvetuka pamusoro pezvipisi zvekare .
Pakupedzisira, nepo ichi chisiri chedu chekare chetsika yekutarisa - tichiona senzira yekuisa kuvimba muQualcomm kuti manhamba avo achaberekana pazvigadzirwa zvemabhizimusi - ingangoita pekutanga kutaura nezve kuita. Uye, neicho chakatorwa pameso, chiri kuita kunge iyo nyowani Snapdragon 888 haizonyadzise, ​​kumisikidza Qualcomm kune rimwe gore rakasimba rekuurayiwa kumberi kweSoC.
Kuongorora OnePlus 'Performance Maitiro: Kugadziridza kana Kusarudzira?